Fursadaha Tabarucida ah ee Caawinta Quudinta Kuwa Kale | Tonka Adeegaa
Dadka Caawinaya Dadka Kale (PROP)
Urur aan macaash doon ahayn, oo u shaqeeya adeegyo badan oo u adeega carruurta, qoysaska, dadka waaweyn iyo dadka waayeelka ah ee ku nool Eden Prairie iyo Chanhassen. Mutadawiciin ayaa loo baahan yahay si ay u kala soocaan deeqaha iyo khaanadaha keydka cuntada, ka shaqeeyaan xafiiska una caawiyaan mashaariicda gaarka ah.
Haatan waxaa kafaala qaaday Horumarinta Madadaalada Minneapolis si ay u quudiso una siiso gargaar deg deg ah shakhsiyaadka hoy la’aanta ah ee ku nool magaalooyinka mataanaha ah. Samee kuna deeqo ismaris si habeen walba loogu geeyo hoylaawayaasha dariiqa iyo hoyga.
Gacan bixi. Quudi reer. Adiga la'aantaa ma sameyn karno. Tabaruceyaashu waxay kala soocayaan cuntada lagu deeqo, waxay xirxiraan sanduuqyo cunno gaar ah leh, waxayna naga caawiyaan inaan dadka kale ka barinno waxa ay sameyn karaan si ay uga caawiyaan la dagaallanka gaajada. Nagala soo qaybgal oo arag waxa farqi weyn u leh waqtigaaga iyo dadaalkaagu.
Cuno Caruurteyda Gaajaysan
Kooxo iyo shaqsiyaad mutadawiciin ah ayaa u baahday in ay raashin ku xirxiraan goobta Chanhassen si loogu raro dadka u baahan adduunka oo dhan.
Maaddadu waa mid aan faa'iido doon ahayn oo ku saabsan ujeedada ah ballaarinta helitaanka caafimaadka iyo cuntada, albaabka xiga iyo adduunka oo dhan. Nagala soo qaybgal abuuritaanka adduun aan dhammaanteen muhiimad dheeraad ah u leenahay.
Xarunta cuntada ee ICA
Fursado badan oo shaqsi iyo kooxeed si ay ugu tabarucaan goobaha lagu qaybiyo shelf ee cuntada iyo mashaariic gaar ah.
Wadajirka Wadajirka ah ee Wadajirka Bulshada (IOCP)
Fursadaha shaqsiyeed iyo kooxeed ee tabaruceyaasha da 'kasta ha ahaadeene
Gacmo Badan Cunnooyin Badan (Hore carruurtu waxay uga soo horjeedaan gaajada)
Urur iskaa wax u qabso ku shaqeeya ayaa u heellan dhiirrigelinta, ka qaybgalidda, iyo waxbarista dadka, oo ay ugu horreyso carruurteennu, iyaga oo baakadeeya cunnooyinka nafaha lagu badbaadinayo ee fududeeya gaajada adduunka. Dhacdooyinka xirxirida cuntada bil kasta ee Excelsior.
Rooti iyo kalluun
Waxay siisaa cunno nafaqo leh dadka gaajeysan dhowr meelood oo wax lagu cuno oo ku teedsan agagaaraha Twin Cities Metro. Sanadkii la soo dhaafay waxay u adeegeen 358,000 oo raashin ah dadka u baahan.
Ujeedada Gaarsiinta waa bixinta biyo nadiif ah, cunto, daryeel caafimaad iyo waxbarasho caruurta iyo kuwa ku dhibaateysan gudaha iyo dibada. Abaabul dhacdooyinka xirxirida cunnada guurguura ee kooxaha daneynaya una qeybiso cuntada gudaha iyo adduunka.
Dhul-goosashada Labaad ee Qalbi-dhagax
Fursadaha sanadka ee shaqsiyadeed iyo kooxeed goobta Golden Valley si ay uxirxiraan, u kala saaraan una calaamadeeyaan alaabada cuntada loogu deeqay si loo qaybiyo.
Caawinta quudinta kuwa gaajaysan iyo hoylaaweyaasha ee magaalooyinka mataanaha ah adoo sameeya sandwiches kuna deeqa. Mashruuca Sandwich wuxuu quudiyaa 4,500 qof maalin kasta. Darawalo mutadawiciin ah ayaa sidoo kale loo baahan yahay.